बंगलादेशको एउटा गाई, रातारात भयो हिट! - Purbeli News
बंगलादेशको एउटा गाई, रातारात भयो हिट!
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आषाढ २५, २०७८ समय: १२:३७:३२
एजेन्सी / बंगलादेशमा अनौंठो सानो गाई फेला परेपछि हेर्न आउनेहरुको भिड लागेको छ । बंगलादेशको चरिग्रामस्थित एक फार्ममा भेटिएको उक्त गाई २१ सेन्टिमिटरको रहेको बताइएको छ । त्यस्तैगरी उक्त गाईको तौल २८ केजी रहेको छ ।
२३ वर्षपुगेको गाईको त्यतिको उचाई र तौलले मानिसहरु आश्चार्य चकित परेका छन् । रानी नाम दिइएको उक्त गाई हेर्न दैनिकजसो भीड लाग्ने गरेको गाई फार्म संचालन गर्दै आएका हसन हाउलाडरको भनाइ छ । उनी गाई फार्मका व्यवस्थापक रहेका छन् । उनले आफूले उक्त गाई संसारकै सबैभन्दा सानो गाई भनेर गिनिज बुक अफ वल्ड रेकर्डका लागि निवेदन समेत दिएको बताएका छन् ।